Saadaashii Uu Mauricio Ka Sii Bixiyey Arteta Oo Maqluubka Isku Rogtay – Heemaal News Network
Tababarihii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa sannadkii hore saadaal kasii bixiyey sida ay noqon doonto xaaladda Mikel Arteta markii loo magacaabay tababaraha Arsenal, isagoo beddelay Unai Emery oo hortii shaqada laga sii caydhiyey iyo Freddie Ljungberg oo si ku-meelgaadh ah usii joogay.
Mauricio Pochettino oo la hadlayay warbaahinta ayaa wax laga weydiiyey sida ay Arsenal noqon doonto mar haddii loo dhiibay tababare usoo ahaa ciyaartoy oo wax badan ka garanaya taariikhda kooxda, inkasta oo aanu lahayn khibrad tababarenimo.
Pochettino ayaa waqtigaas bixiyey saadaal ka farxinaysay Arteta, isaga oo tibaaxay inay u noqon doonto waqti guuleed, waxaanu yidhi: “Haa dabcan, wuxuu noqon doonaa mid ku guuleysta (tababarenimada Arsenal), Waa tababare sare oo leh shaqsiyad iyo dhaqan wanaagsan. Waxay ila tahay inuu leeyahay tayooyinkii uu ku noqon lahaa mid ka mid ah tababareyaasha ugu wanaagsan.”
Waqtiga uu Mauricio Pochettino hadalkan lahaa oo ahayd sannadkii 2019kii, waxa uu soo daliishanayay aqoonta uu u leeyahay Arteta oo ay u wada ciyaareen kooxda reer France ee PSG, ayaa yihdi: “Wuxuu ahaa ciyaartoy da’yar markii aanu u wada ciyaaraynay Paris Saint-Germain, wuxuu ahaa 17 jir markii uu yimid balse wuxuu ahaa mid cad-cad.”
Sidaas oo ay tahay, saadaasha uu bixiyey Mauricio Pochettino ayaa hadda u muuqata inay dhinaca kale isku rogtay iyadoo uu Mikel Arteta ku fashilmay inuu Arsenal kusoo dabbaalo jidka guusha siddeeddii ciyaarood ee ugu dambeeyey oo aanay wax guul ah arag.
Toddobaadka soo aaddan, waxay Arsenal la ballansan tahay Chelsea oo ay ku ballansan yihiin ciyaar wax badan ka go’aamin doonto mustaqbalka tababare Mikel Arteta, taas oo haddii laga badiyo ay noqon karto dhamaadka waayihiisa tababarenimo ee Arsenal.
Bacalwaan Oo Isbitaal Ku Jarmalka Ugu Geeryooday Xanuunka Covid-19